admin – Gacayte Hotel
gacayte hotel bosaaso
MADAXWEYNAHA PUNTLAND OO KORMEERAY XAALADDA AMNIGA MAGAALADA BOSASO
Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 16 October 2017 gelinkii danbe kormeeray magaaladsa Boosaaso ee casimada ganacsiga Puntland, kormeerkaas oo uu ugu kuur gelayey xaaladda guud...
gacayte hotel bosaso waa hotel ugu wayn puntland gaar bosaso wuxuna ku yaalla xeebta bosaso. waxan ha helaysa wax kasta oo aad u baahadto sida jiif raaxo leh ...
Beelaha direed oo kamida Beelaha Soomaaliyeed ee Daga Gobolka Bari ayaa maanta Magaalada Bosaso gaar ahaan Hotelka Gacayte ku Qabtay Munaasabad lagu Caleema saarayay Suldaanka Beelaha Direed ee Gobolka Bari . Waxaana Munaasabadan kasoo...
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa galabta 29-Jan-2016 socod dheer oo lug ah kusoo maray qaybo kamid ah shaaracyada waaweyn ee magaalada Boosaaso ee Xarunta ganacsiga Puntland. Madaxweynaha ayaa sood dheer kadib...
Bosaso(pp)Nabadoonada iyo odoyaasha Degmadda Bosaso ayaa bayaan adag ka soo saaray isdabamarin lagu sameeyay xulista gollaha degaanka ee degmada bosaso, waxayna ku eedeeyeen Guddiga xulida xubnaha gollaha degaanka, inay ku xadgudbeen sharciga L7 ee...
Bosaso(pp)Waxaa maanta Soo garay Magaaladda Bosaso ee Xarunta Ganacsga Puntland Wasiirku xigeenka Wasarada Maaliyada Dawlada Federalka Soomaliya ahna Xildhiban ka tirsan Baarlamaanka Soomaliya Mudane Maxmud Xayir Ibraahim ,Waxaana Ku Soo Dhoweyey Magaalada Bosaso Maamulka...
Waxaa maanta xilka si rasmi ah ula wareegay gudoomiyaha cusub ee gobalka Bari Yuusuf Maxamad Waceys(Dhedo), kadib xaflad xilwareejin ah oo maanta ka dhacday magaalada Bosaso. Advertisement Yusuf Maxamad Waceys ayaa xilka kala wareegay...
Waxaa maanta madaxweynaha xukuumadda Puntland Dr. C/weli Maxamad Cali Gaas uu daah furay xafiiska qunsuliyadda Yemen ee Puntland, kadib xaflad ka dhacday hotel Gacayte ee magaalada Bosaso. Waxaa ka soo qeyb galay munaasabadda safiirka...
Gacayte Hotel © 2022. All Rights Reserved.